Ngesikhathi sokukhulelwa owesifazane kufanele aqaphele ngokucophelela impilo yakhe futhi alalele umzimba wakhe. Ukudla okunomsoco kunendima ebalulekile, ngoba noma yimuphi umkhiqizo omusha ungabangela ukusabela okweqile, okungathinta impilo yekusasa lomntwana. Futhi nakuba kunezindlela eziningi zokwelapha ekhemisi, udokotela kuphela ongakwazi ukubeka lokhu noma lowo muthi uma kubheka kuyadingeka. Kulezi zindlela kungenzeka ukuthi ulungiselele ukulungiselela "Diazolin" - ekukhulelwe ukuyisebenzisa kungenzeka kuphela ngaphansi kwesitatimende sochwepheshe.
Isidakamizwa esithi "Diazolin" sinamakhemikhali e-antihistamine, angasetshenziselwa ukuphatha ukusabela kwemizwa yemvelo ehlukahlukene, kanye nokusetshenziswa kwayo ekulashweni okuyinkimbinkimbi yezifo ezihlukahlukene. Njengoba sekushiwo kakade, izidakamizwa "Diazolin" ngesikhathi sokukhulelwa zingasetshenziswa kuphela njengoba kunqunywe udokotela, kanti umthamo onconywayo kufanele ugcinwe ngokucophelela. Ukusetshenziswa kosuku olude kwalesi sidakamizwa akuyona into engathandeki futhi, noma ngabe imithi yokuthenga ayidingekile, akufanele usebenzise le mithi ngaphandle kokuqokwa kochwepheshe. Into esemqoka yokusebenza kwezidakamizwa i-mebhydrolyn. Uma kusetshenziswa ngomlomo, izidakamizwa "Diazolin" (amaphilisi noma amaphilisi) ziyashesha futhi zifinyelele ekuhlungeni okuphezulu emzimbeni womuntu ngemva kwemizuzu engu-25. Kulesi simo, isenzo saso siqala emva kwemizuzu engama-30, kanti ubude bungamahora angu-48.
Lapho umuthi "Diazolin" isetshenziselwa ukukhulelwa
Abantu abaningi banesifo sofuba, abesifazane abakhulelwe abahlukile. Kwezinye izimo, umzimba wesifazane ungabhekana nokubhekana nesifo esithile, kodwa ngezinye izikhathi lokhu akukwenzeki, ezimweni ezinjalo ukwelashwa kuyadingeka. I-Conjunctivitis kanye ne-rhinitis, okuyizinto ezivuthwa ngokwemvelo, i-neurodermatitis, ukungezwani komzimba kokudla nemithi, kanye ne-eczema kanye nesifo sokuphefumula kwesibindi - zonke lezi zifo ngesikhathi sokukhulelwa zingaba zimbi nakakhulu.
Isidakamizwa esithi "Diazolin" yezingane: sebenzisa
Kulezi ziguli ezincane, lesi sidakamizwa sitholakala ngesimo se-granules esichitha kalula emanzini. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba unikeze imithi izingane, ichitheka ebhodleleni oyinyumba nanoma yikuphi ukuphuza (itiye, ijusi, amanzi), ivolumu engadluli ku-100 ml. Ngemva kwalokhu, kubalulekile ukukala isilinganiso somuthi odingekayo, udokotela asungula. Lokhu kungenziwa nge-syringe noma indebe yokulinganisa. Isixazululo esiphelele ebhodleleni singagcinwa esiqandisini izinsuku ezinhlanu, kodwa ngaphambi kokusebenzisa umthamo wesidakamizwa kudinga ukushiswa. Ingxube ithathwa ngesikhathi noma emva kokudla.
Isidakamizwa esithi "Diazolin" ngesikhathi sokukhulelwa kufanele sisetshenziswe ngokucophelela, ngoba imfundo ithi ukusetshenziswa kwalesi sidakamizwa kuyadingeka kuphela uma umphumela wokwelashwa udlulile kunokwenzeka imiphumela emibi. Lesi sidakamizwa sinqatshelwe ngokweqile ezifweni zomuthi wamathumbu, ngoba ukusetshenziswa kwalo kulokhu kungabangela ukuphuma kwangaphakathi. Ngesikhathi sokukhulelwa, umuthi ungasetshenziswa kuphela ngaphansi kokuqondiswa kwezempilo okusheshayo. Okunye okungahle kwenzeke kulo muthi ukuthi kubangela ukuvimbela nokulala.
Ngokuphathelene nesidakamizwa "i-Xizal": imiyalelo yokusetshenziswa kweziguli maduze
I-gel Diclofenac: imiyalelo yokusetshenziswa,
Edolobheni Orsha ehhotela iyakwamukela izivakashi
Adjika utamatisi oluhlaza - zokupheka
Indlela umeme iqembu e "Vkontakte" abasebenzisa ingosi yokuxhumana
Uma izinyo ngokuhlakanipha libuhlungu ukuthi yenzeni - uthi udokotela wamazinyo
Amabhasari - kungenxa nomqondo ke? Khulisa erudition kungenzeka?
UNkulunkulu weMpi: kudlula umdlalo othakazelisayo
Highchair Graco Tea Time: Uhlolojikelele, incazelo kanye nokubuyekeza
Ungalanda kanjani kusuka ikhamera yesithombe kuya kwikhompyutha. Indlela yokuphonsa isithombe kukhompyutha yakho